I-GENO-break - I-Ultrasonic Water Disinfection - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukwelashwa kwamanzi kwe-Gruenbeck GENO-break ®-System IV kuhlanganisa iprosesa ye-Hielscher ultrasonic enokukhanya okukhulu kwe-UV-C kokususa ukungasebenzi kwe-diski.
Amanzi ashisayo namachibi angakwazi ukuthwala amabhaktheriya eLegionella, ama-pathogens nezinye izinto ezincane ezincane. ILegionella yaziwa ngokubangela iLegionellosis. Ukulwa namagciwane aseLegionella ayingozi emithonjeni yamanzi ashisayo futhi kuvikeleke indawo yokuphepha evikelekile i Inkampani ye-Gruenbeck iye yasungula isimiso se-GENO-break®. Lolu hlelo olusha lusebenzisa ubuchwepheshe be-Hielscher ultrasonic ngokuhambisana ne-UV irradiation futhi luxazulule inkinga yeLegionella ngamanzi angaphezu kuka-150 okushisa amanzi eJalimane.
Ukuphuza amanzi okuqhubekayo
I-Legionella ingalwa ngezindlela eziningi, njenge-disinfection ye-thermal, lapho amanzi esistimu avutha khona kufika ku-70 ° C imizuzu eminingana. Enye yezinkinga ezinkulu ngale ndlela yukuthi iyanqamuka futhi ayinakwenzeka ukufaka izinhlelo kumanzi ashisayo ngamapayipi amade noma ekugcineni. Noma yikuphi iLegionella eshiya ohlelweni izokhula futhi ikhule. Ngenxa yalesi sizathu, uhlelo lwe-GENO-break® luyindlela eqhubekayo yokwelashwa kwamanzi futhi inikeza ukuphepha 24h ngosuku, izinsuku ezingu-365 ngonyaka. Ngalokhu, izinga leLegionella ligcinwe phansi.
Indlela ukukhipha amagciwane okusebenza ngayo
UV-disinfection isetshenziswe iminyaka eminingi. I-UV-ukukhanya ingasebenzi amabhaktheriya eLegionella emanzini. Kodwa-ke, ama-bacterium eLegionella ahlala ezinhlobonhlobo ezifana ne-amoeba, futhi. Ku-amoeba amabhaktheriya eLegionella akhula futhi aphinde azalise. I-amoeba iyamelana ne-UV-light, i-chlorine, i-ozone nokushisa. I I-Gruenbeck Uhlelo lwe-GENO-break lwakhiwe njenge-system zone ezimbili.
Indawo yokuqala iphazamisa izilwane ezitholayo (ie amoeba) ngokusetshenziswa kwama-processors we-Hielscher ultrasonic. cavitation ultrasonic iphula isakhiwo se-cell of the organism futhi iveza iLegionella mahhala futhi isengozini emanzini. Endaweni yesibili amanzi ahanjiswa ngukukhanya kwe-UV-C okuvimbela amabhaktheriya.
I-Gruenbeck GENO-break®-System IV
I-GENO-break®-System IV isetshenziselwa izinhlelo zamanzi ashisayo amalitha amahlanu noma ngaphezulu. Ihlanganisa i-ultrasonication ne-UV-C ukukhanyisa endaweni yokuvimbela umsindo. Uhlelo luqhubeka ngokuqapha ngokulawulwa kwe-elekthronikhi. Lokhu kuhlanganisa ukuqapha kokushisa.
I-Legionellosis yisifo esithathelwanayo esibangelwa amagciwane aseLegionella. ILegionellosis ithatha izinhlobo ezimbili ezihlukene: Legionella pneumonia (Legion Fever) noma iPotiac fever. Izimpawu zibandakanya umkhuhlane omkhulu, ubunzima obunzima bokuphefumula, ukudideka, ikhanda eliyinkimbinkimbi nezinkinga zezinhliziyo nezesisulu. Kungaba yingozi uma kungakaze kutholakale ngaphambi kwesikhathi futhi kunakekelwe ngokwemithi.
Mayelana ne-Gruenbeck Water Treatment
I-Gruenbeck ungumhlinzeki ochwepheshe wokuxazulula izixazululo emkhakheni wokuphathwa kwamanzi ngezindawo zokuhlala, ubuchwepheshe bokubhukuda, ubuchwepheshe bokuhlanzeka / ezempilo, imboni yokudla / isiphuzo, iziteshi zamandla eziphakathi kanye nokunikezwa kwamanzi. I I-Gruenbeck iqembu lezinkampani liphumelela ngempumelelo emhlabeni wonke. Abasebenzi abangu-700 basebenza endlunkulu yenkampani kanye nezinkampani ezingaphezu kuka-70 ezihlangene. Imikhiqizo ye-Gruenbeck ihlanganisa uhlelo lwe-GENO-break lokulwa neLegionella, ubuchwepheshe bokukhishwa kwe-membrane njengeGENO-OSMO-MSR noma uchungechunge lwe-BOXER.
Isikhangiso se-D-89420 se-Hoechstaedt
Ifoni +49 9074 41-0,
Ifeksi +49 9074 41-100
Ukuphazamiseka Kwamaseli yi-Ultrasonication